China 50ml ecacileyo ibhotile yeglasi kwizinga eliphezulu mveliso kunye nabenzi | Luhai
Ubisi lweglasi kunye neBhotile yotywala
Ibhotile yeglasi yeminquma yeglasi
Iglasi Honey Jar
Iglasi yeoyile kunye neViniga yokuhambisa
Iglasi yetyuwa kunye no Pepper Shaker
Glass Jar Jar
8oz yokugcina isosi coconut ubisi iyogurt pudding iglasi ...
Ngaphaya Sauce Ityuwa engenanto Clear 120ml Square ...
500ml Ecacileyo Glass Olive wekhadi Bottle Set Set Oil ...
Iqhwitha eliQhelekileyo eliCwangcisiweyo lokukrola i-Twist-off ngeLug L ...
Ihowuliseyili Zonke Iintlobo Of Frosted engenanto Bordeaux Red Wi ...
Iqhwitha eliqhelekileyo elingenanto iMinquma ye-Oli yeMarasca 750 ...
250ml 350ml 500ml iglasi square ukusela ibhotile Bever ...
Ihowuliseyili 30ml borosilicate ibhotile ecacileyo ecacileyo ...
1ml 2ml 2oz 50ml ibhotile yeglasi oyile
Ukuphathwa komphezulu: Isigqibo
Ukusetyenziswa kweMizi-mveliso: Isiselo
Izinto ezisisiseko: Iglasi
Izinto zomzimba: Iglasi
Izinto zekhola: Iglasi
Uhlobo lokutywina: ISITHUBA SENKONZO
Sebenzisa: Amayeza oTywala
Amandla: 250ml / 500ml / 750ml / 1000ml
Ukusetyenziswa: ioyile yomnquma
Imilo: Square okanye Round
I-OEM / i-ODM: yamkelekile
Isiqinisekiso: SGS / ISO9001
Uhlobo lwephakheji: Isampulu iya kupakishwa ngephepha le-foam kunye nebhokisi yebhokisi, iiGoods ziya kupakishwa ziipelethi zomthi.
Iisampulu: ukupakisha amagwebu + iibhokisi
1) Ukupakisha ngeepelethi ngokuthe ngqo
2) Ukupakisha ngeebhokisi (yamkela iibhokisi ezenziwe ngokwesiko)
3) Ukupakisha ngeepelethi + iibhokisi (yamkela iibhokisi ezenziwe ngokwesiko)
Ukufezekiswa komthengi kugxile kuthi. Sigcina inqanaba elingaguquguqukiyo lobuchwephesha, umgangatho ophezulu, ukuthembeka kunye nenkonzo yoMenzi weChina i-750ml yesiqhelo ecacileyo yeglasi yeoyile yeOrive yeoyile kunye neCork, kusetyenziswa injongo kanaphakade "yokuphuculwa komgangatho oqhubekayo, ukoneliseka kwabathengi", siqinisekile ukuba into yethu intle ikhuselekile kwaye inoxanduva kwaye iimveliso kunye nezisombululo zethu zithengisa kakhulu ekhayeni lakho nakwamanye amazwe.
Umenzi we-China engenanto yeglasi yeebhotile kunye nexabiso lebhotile yeewayini zeglasi, Ngoluhlu olubanzi, umgangatho olungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye noyilo lwesitayile, ukuthengisa kwethu kusetyenziswa kakhulu kwiindawo zikawonke-wonke nakwamanye amashishini. Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokuphuhlisa iimfuno zoqoqosho nezentlalo. Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abasuka kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane kwezoshishino kwixesha elizayo kunye nokufezekisa impumelelo efanayo!
I-Q1: Ndingazifumana njani iisampulu?
Kuliwonga kuthi ukukunika iisampulu njengemfuneko sakho.
A. Kwiimveliso zesitokhwe, isampulu yasimahla kodwa kuya kufuneka uhlawule iindleko zekhuriya.
B. Iimveliso ezintsha, singenza iisampuli ngokokuyila kwakho.Kodwa singathanda ukubiza iindleko zesampulu, eziya kuncitshiswa xa iodolo iqinisekisiwe.
Q2: Lithini ixesha lakho lokuhambisa?
Oku kuxhomekeke kuhlobo luni lweemveliso ozi-odoleyo.
A.Ukuze ezinye izinto zifane kakhulu njengeyona mveliso iphambili kunye noku-odola ubungakanani obuncinci, ixesha lokuhambisa linokuba ziintsuku nje eziyi-7-15.
B. Iyakuthatha iintsuku ezingama-25 ukuya kwezi-30 zomsebenzi kwisiqulatho somthwalo wesikhongozelo esiqhelekileyo.
I-Q3: Ngaba ungayenza i-OEM?
A: Ewe, singenza iimveliso ze-OEM. Uyilo olwenzelwe wena, izixhobo, ubungakanani, imibala, njl. Umsebenzi wobugcisa uya kufuneka. Siza kukhusela uyilo lwabathengi, iimveliso, uphawu lwentengiso ngononophelo.
I-Q4: Ufuna ntoni ukunika ikowuti?
A: Inkcazo yokuhombisa, enje ngohlobo, ubungakanani, umbala / ukugqiba, amandla, ubunzima, umsebenzi wobugcisa, kunye nobungakanani obufunayo.
B: Amagama orhwebo, njengoko ufuna ixabiso le-FOB okanye ixabiso le-CIF, ukuba i-CIF, nceda usixelele indawo ekuyiwa kuyo.
Q5: Zithini izibonelelo zeemveliso zakho?
A: Umgangatho olungileyo kunye namaxabiso okhuphiswano. Ulawulo lomgangatho olungqongqo ngexesha lokusebenza kwemveliso. Umsebenzi weqela lomsebenzi: Uyilo, uPhuhliso, ukuvelisa, ukuhlanganisa, ukupakisha kunye nokuthumela.
Egqithileyo Ihowuliseyili Cacisa engenanto 1 Liter Juice Isiselo Glass Bottle Ubisi
Okulandelayo: 250ml 500ml 750ml Ibhotile ngaphaya Ezityiwayo Olive Oil Glass Bottle Nge Metal Screw Cap
Ecacileyo Ibhotile yeOlive yeBhotile
Iglasi yokupheka Ioyile yeoyile
Ibhotile yeglasi eluhlaza yeglasi
Round Ibhotile yomnquma oyile
Ibhotile yeglasi yomnquma
250ml 500ml 1000ml ecacileyo ibhotile yeglasi yobisi nge ...
Ihowuliseyili 330ml ibhotile yeglasi ecacileyo nge cr ...
250ml 330ml 500ml 1000ml amber engenanto iglasi ibhiya ...
Ecacileyo engenanto kunye Amber Ihowuliseyili Glass Beer Bott ...
Ihowuliseyili Zonke Iintlobo Of Frosted engenanto Bordeaux R ...
250ml 500ml 750ml Square Bottle ngaphaya Edi ...
Uhlalutyo lwentengiso lweebhotile zeglasi
Ukuphuhliswa kwethemba lebhiya yeglasi kunye ne ...
Izinto eziluncedo zeebhotile zeglasi njengezikhongozelo